【 အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး 】အူမကွီးအသားပို (colonic polyps)အ‌ကွောငျးတစတေ့စောငျးပေး | Opinion Leaders
အူမကွီးအသားပို (colonic polyps) မြားသညျ အူမကွီးအတှငျးသို့ ကွီးထှားလာသော အသားပိုမြားဖွဈသညျ။ အသကျအရှယျကွီးသူမြားတှငျ အတှမြေ့ားပွီး အသကျငယျငယျနှငျ့ ဖွဈရငျတော့ မြိုးရိုးဗီဇအရ ဖွဈပှားခွငျးဖွဈပွီး အခွားကငျဆာမြားနှငျ့လညျး တှဲတတျသညျ။
ဘာကွောငျ့ အူမကွီးအသားပိုမြားသညျ အရေးပါသလဲ?
အူမကွီးကငျဆာ ဖွဈပှားမှုတှငျ မြိုးရိုးဗီဇနှငျ့ မသကျဆိုငျဘဲ ဖွဈပှားမှုနှုနျးမှာ ၈၅ရာခိုငျနှုနျးရှိပါသညျ။ အမြားစုမှာ အူမကွီးအသားပိုမှ ကငျဆာပွောငျးခွငျးဖွဈသညျ။ အူမကွီးအသားပိုမြားသညျ မြားသောအားဖွငျ့ ဘာလက်ခဏာမှပွလမေ့ရှိဘဲ အူမကွီးမှနျပွောငျးကွညျ့ရငျး အမှတျမထငျတှတေ့တျပါသညျ။ တခါတရံ ဝမျးထဲသှေးပါခွငျး၊ သှေးအားနညျးခွငျး၊ ဝမျးထဲအခြှဲပါခွငျး လက်ခဏာမြားနဲ့ လာတတျပါတယျ။
အူမကွီး အသားပို ပိုမိုဖွဈပှားစသေော အကွောငျးရငျးမြား
-မြိုးရိုးထဲတှငျ အူမကွီးအသားပို ရာဇဝငျရှိသူမြား
-နာတာရှညျ အူမကွီးရောငျရမျးခွငျး (Inflammatory bowel diseases)
အူမကွီး အသားပိုမြားကို အမြိုးအစားခှဲရာတှငျ-
(၁) ပုံစံအရ Sessile နှငျ့ Pedunculated ဟူ၍ နှဈမြိုးခှဲနိုငျသညျ။
-Sessile polyps မြားသညျ အူနံရံတှငျ ထိုးထှကျမနဘေဲ ကပျလကျြတညျရှိသော အသားပိုမြားဖွဈသညျ။
-Pedunculated Polyps မြားသညျ အူနံရံအတှငျးမှ lumen သို့ အညှာဖွငျ့ ထိုးထှကျနသေော အသားပိုအမြိုးအစားဖွဈသညျ။
(၂)နောကျတနညျးအားဖွငျ့ ၄ မြိုးခှဲနိုငျသညျ-
-Hyperplastic polyps ( အပေါမြားဆုံးတှရေ့သညျ့ အမြိုးအစားဖွဈပွီး အူမကွီးအောကျပိုငျးနှငျ့ အစာဟောငျးအိမျတှငျ အတှမြေ့ားသညျ၊ အမြားအားဖွငျ့ ကငျဆာမပွောငျးတတျပါ)
-Adenoma polyps ( ထိုအသားပိုမြားသညျ နောငျ ၁၀နှဈ အနှဈ ၂၀တှငျ ကငျဆာပွောငျးနိုငျခရြှေိပါသညျ၊ Histologically အရ tubular, villous နှငျ့ tubulovillous ဟူ၍ ခှဲခွား နိုငျသညျ)
-Inflammatory polyps (အူရောငျရမျးသော ရောဂါမြားဖွဈသညျ့ Chron's disease, Ulcerative colitis ရှိသူမြားတှငျ တှရေ့တတျသညျ)
-Neoplastic polyps (ကငျဆာအဖွဈ ပွောငျးလဲနှငျ့ပွီးသော အသားပိုမြားဖွဈသညျ)
-ဝမျးထဲ သှေးပါ၊ မပါစဈဆေးခွငျး (Faecal immunochemical test)
-အူမကွီးလမျးကွောငျးအောကျပိုငျး မှနျပွောငျးကွညျ့ခွငျး (Sigmoidoscopy)
-အူမကွီးလမျးကွောငျး တလြှောကျလုံးမှနျပွောငျးကွညျ့ခွငျး (Colonoscopy)
-ကှနျပြူတာ ဓါတျမှနျ (CT scan) ပွုလုပျခွငျး
ဘယျလို အခကျြတှရှေိရငျ ကငျဆာပိုပွောငျးနိုငျလို့ သတိပွုရမလဲ?
-အသားပို အရှယျအစားကွီးခွငျး (၂စငျတီမီတာထကျပိုခွငျး)
-အသားပို အမြားအပွားရှိခွငျး (multiple polyps)
-Histologically အရ villous architecture ရှိခွငျး၊ high grade dysplasia ဖွဈခွငျး
-အူမကွီးအသားပိုမြားအတှကျ ကုသခွငျးမှာ အသားပိုအမြိုးအစားကိုလိုကျ၍ ဖယျရှားခွငျးဖွစိပါသညျ။ ထိုသို့ ဖယျရှားခွငျးဖွငျ့ အူမကွီးကငျဆာဖွဈပှားမှုကို ၆၅ ရာခိုငျနှုနျးခနျ့ လြော့ခနြိုငျပါသညျ။
-မှနျပွောငျးကွညျ့စဉျ အူမကွီးအသားပို Adenoma အမြိုးအစားတှပေ့ါက ဖယျရှားသငျ့ပါသညျ။
-Hyperplastic polyp ဖွဈသျောလညျး အရှယျအစားကွီးလြှငျ အူမကွီးညာဘကျခွမျးတှငျရှိလြှငျ အန်တရာယျရှိသော အသားပိုအမြိုးအစား SSAP ဟုသတျမှတျပွီး ဖွတျတောကျကုသရနျလိုသညျ။
-အသားပိုကို အသားစ biopsy ပို့ပွီး ကငျဆာပွောငျးသော လက်ခဏာရှိမရှိ အမြိုးအစားစဈဆေးရနျလိုသညျ။
-ကငျဆာလက်ခဏာရှိသော အသားပိုမြားအား မှနျပွောငျးဖွငျ့ ဖွတျထုတျရုံမဟုတျဘဲ ခှဲစိတျကုသရနျလိုပါသညျ။
*အူမကွီးအသားပိုမြားကို ဖွတျတောကျဖယျရှားပွီးသျောလညျး ဆရာဝနျညှနျကွားသညျ့အတိုငျး ရကျခြိနျးပုံမှနျပွသရနျနှငျ့ လိုအပျရငျ အူမကွီးမှနျပွောငျးပွနျကွညျ့ရနျ လိုပါသညျ။*
အူမကြီးအသားပို (colonic polyps) များသည် အူမကြီးအတွင်းသို့ ကြီးထွားလာသော အသားပိုများဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်ကြီးသူများတွင် အတွေ့များပြီး အသက်ငယ်ငယ်နှင့် ဖြစ်ရင်တော့ မျိုးရိုးဗီဇအရ ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး အခြားကင်ဆာများနှင့်လည်း တွဲတတ်သည်။
ဘာကြောင့် အူမကြီးအသားပိုများသည် အရေးပါသလဲ?
အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုတွင် မျိုးရိုးဗီဇနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမှာ ၈၅ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ အများစုမှာ အူမကြီးအသားပိုမှ ကင်ဆာပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အူမကြီးအသားပိုများသည် များသောအားဖြင့် ဘာလက္ခဏာမှပြလေ့မရှိဘဲ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ရင်း အမှတ်မထင်တွေ့တတ်ပါသည်။ တခါတရံ ဝမ်းထဲသွေးပါခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ ဝမ်းထဲအချွဲပါခြင်း လက္ခဏာများနဲ့ လာတတ်ပါတယ်။
အူမကြီး အသားပို ပိုမိုဖြစ်ပွားစေသော အကြောင်းရင်းများ
-မျိုးရိုးထဲတွင် အူမကြီးအသားပို ရာဇဝင်ရှိသူများ
-နာတာရှည် အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်း (Inflammatory bowel diseases)
အူမကြီး အသားပိုများကို အမျိုးအစားခွဲရာတွင်-
(၁) ပုံစံအရ Sessile နှင့် Pedunculated ဟူ၍ နှစ်မျိုးခွဲနိုင်သည်။
-Sessile polyps များသည် အူနံရံတွင် ထိုးထွက်မနေဘဲ ကပ်လျက်တည်ရှိသော အသားပိုများဖြစ်သည်။
-Pedunculated Polyps များသည် အူနံရံအတွင်းမှ lumen သို့ အညှာဖြင့် ထိုးထွက်နေသော အသားပိုအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
(၂)နောက်တနည်းအားဖြင့် ၄ မျိုးခွဲနိုင်သည်-
-Hyperplastic polyps ( အပေါများဆုံးတွေ့ရသည့် အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အူမကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် အစာဟောင်းအိမ်တွင် အတွေ့များသည်၊ အများအားဖြင့် ကင်ဆာမပြောင်းတတ်ပါ)
-Adenoma polyps ( ထိုအသားပိုများသည် နောင် ၁၀နှစ် အနှစ် ၂၀တွင် ကင်ဆာပြောင်းနိုင်ချေရှိပါသည်၊ Histologically အရ tubular, villous နှင့် tubulovillous ဟူ၍ ခွဲခြား နိုင်သည်)
-Inflammatory polyps (အူရောင်ရမ်းသော ရောဂါများဖြစ်သည့် Chron's disease, Ulcerative colitis ရှိသူများတွင် တွေ့ရတတ်သည်)
-Neoplastic polyps (ကင်ဆာအဖြစ် ပြောင်းလဲနှင့်ပြီးသော အသားပိုများဖြစ်သည်)
-ဝမ်းထဲ သွေးပါ၊ မပါစစ်ဆေးခြင်း (Faecal immunochemical test)
-အူမကြီးလမ်းကြောင်းအောက်ပိုင်း မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း (Sigmoidoscopy)
-အူမကြီးလမ်းကြောင်း တလျှောက်လုံးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း (Colonoscopy)
-ကွန်ပျူတာ ဓါတ်မှန် (CT scan) ပြုလုပ်ခြင်း
ဘယ်လို အချက်တွေရှိရင် ကင်ဆာပိုပြောင်းနိုင်လို့ သတိပြုရမလဲ?
-အသားပို အရွယ်အစားကြီးခြင်း (၂စင်တီမီတာထက်ပိုခြင်း)
-အသားပို အများအပြားရှိခြင်း (multiple polyps)
-Histologically အရ villous architecture ရှိခြင်း၊ high grade dysplasia ဖြစ်ခြင်း
-အူမကြီးအသားပိုများအတွက် ကုသခြင်းမှာ အသားပိုအမျိုးအစားကိုလိုက်၍ ဖယ်ရှားခြင်းဖြစိပါသည်။ ထိုသို့ ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကို ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျော့ချနိုင်ပါသည်။
-မှန်ပြောင်းကြည့်စဉ် အူမကြီးအသားပို Adenoma အမျိုးအစားတွေ့ပါက ဖယ်ရှားသင့်ပါသည်။
-Hyperplastic polyp ဖြစ်သော်လည်း အရွယ်အစားကြီးလျှင် အူမကြီးညာဘက်ခြမ်းတွင်ရှိလျှင် အန္တရာယ်ရှိသော အသားပိုအမျိုးအစား SSAP ဟုသတ်မှတ်ပြီး ဖြတ်တောက်ကုသရန်လိုသည်။
-အသားပိုကို အသားစ biopsy ပို့ပြီး ကင်ဆာပြောင်းသော လက္ခဏာရှိမရှိ အမျိုးအစားစစ်ဆေးရန်လိုသည်။
-ကင်ဆာလက္ခဏာရှိသော အသားပိုများအား မှန်ပြောင်းဖြင့် ဖြတ်ထုတ်ရုံမဟုတ်ဘဲ ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုပါသည်။
*အူမကြီးအသားပိုများကို ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားပြီးသော်လည်း ဆရာဝန်ညွှန်ကြားသည့်အတိုင်း ရက်ချိန်းပုံမှန်ပြသရန်နှင့် လိုအပ်ရင် အူမကြီးမှန်ပြောင်းပြန်ကြည့်ရန် လိုပါသည်။*